Football Khabar » एसी मिलान हारबाट मुस्किलले बच्यो : युभेन्टसलाई फाइदा !
एसी मिलान हारबाट मुस्किलले बच्यो : युभेन्टसलाई फाइदा !
इटालियन सिरी ए लिग लिडर एसी मिलान लिगको ११औं साताको खेलमा हारबाट मुस्किलले बचेको छ । गत राति आफ्नो घरेलु मैदानमा भएको खेलमा मिलानले पाहुना टोली पार्मासँग पछि परेको स्थितिमा कमब्याक गरेर हार पन्छाउन सफल भयो ।
खेलमा ०–२ ले पछि परेको स्थितिमा मिलानलाई हारबाट बचाउन थियो हर्नान्डेजले २ गोल गरे । पाहुना टोली पार्माले खेलको १३औं मिनेटमा हेर्मानी अजेभेड जुनियरको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । त्यसपछि ५६औं मिनेटमा स्मन कुट्रिचले गोल गरेपछि मिलान ०–२ ले पछि पर्न गयो ।
तर, त्यसपछि मिलान खेलमा फर्कियो । ५८औं मिनेटमा हर्नान्डेजले पहिलो गोल गरेर टिमलाई खेलमा फर्काउने संकेत गरेका थिए । मिलान सिजनको पहिलो हार नजिक पुगेको थियो । तर, थपिएको समयको पहिलो मिनेटमा हर्नान्डेजले नै व्यक्तिगत दोस्रो गोल गरेपछि मिलानले हार टार्दै खेल २–२ को बराबरीमा टुंगायो ।
अब यो बराबरीपछि मिलानले ११ खेलबाट २७ अंक बनाएको छ । ऊ अझैसम्म अपराजित रहँदै शीर्ष स्थानमै रहेको छ । तर, बराबरी नतिजपछि दोस्रो स्थानको इन्टर मिलान, तेस्रो स्थानको नापोली र चौथो स्थानको युभेन्टसलाई फाइदा पुगेको छ । हालको स्थितिमा मिलान अब शीर्ष स्थानमा इन्टरभन्दा ३, नापोली र युभेन्टसभन्दा समान ४–४ अंकले मात्रै अघि छ । यता, पार्मा ११ अंकसहित १४औं स्थानमा छ ।
प्रकाशित मिति २९ मंसिर २०७७, सोमबार १०:५४